मिस्त्री खोला जलविद्युतको ९०% निर्माण कार्य सकियो, २ महिनामा उत्पादन सुरु « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
मिस्त्री खोला जलविद्युतको ९०% निर्माण कार्य सकियो, २ महिनामा उत्पादन सुरु
काठमाडौं । म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले अबको २ महिनामा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ ।
९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाबाट आगामी असोज अन्त्यबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुन लागेको हो । २०७३ साउनदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको व्यवस्थापक विजेन्द्रलाल राजभण्डारीले बताए । उनका अनुसार बाँध क्षेत्रको निर्माण पूरा भएको छ ।
अहिले सुरुङ र विद्युतगृहमा समानरूपले काम भइरहेको छ । खनेर सकिएको २.३ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमा ढलान भइरहेको उनले बताए । विद्युतगृहमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जडानको काम धमाधम भइरहेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादन सुरु गर्न अझै २ महिना लाग्ने पनि राजभण्डारीले बताए ।
यसअघि आयोजनाबाट भदौदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका थियो । तर, सुरुङ ढलानका क्रममा समस्या देखिएपछि उत्पादन तालिका एक महिना लम्बिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाना सबस्टेसनमा लगेर जोडिनेछ । दाना सबस्टेसनसम्म आवश्यक ४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन कम्पनी आफैंले निर्माण गरिरहेको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा नविल बैंकको अगुवाइमा ६ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन ।
२०७६ साउन २७ गते प्रकाशित
सानिमा माई हाइड्रोपावरकाे १०% बोनस सेयर प्रस्ताव
काठमाडौं । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकार गुठीको सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा छ, नीजि गुठी गुठियारकै सम्पत्ति – मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकार गुठीको सम्पत्ति जोगाउने
जनता बैंकद्वारा आर्थिक सहयोग
काठमाण्डौं । जनता बैक नेपाल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान,
बुढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारण : प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।
सिभिल बैंक पनि मर्जरमा जाने
लोकसेवा आयोगले भर्खरै फेरि निकाल्यो यस्तो जरुरी सूचना
यति ठुलो संख्यामा शिक्षकको दरबन्दी मिलान, कुन जिल्ला र कुन…
फेरि सार्वजनिक भयो करार शिक्षकको अर्को थप नयाँ सूचि (जिल्ला…
२६ कम्पनीको ७ अर्बको बोनस सेयर, कसको कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । भोलि आइतवार अर्थात मंसिर २९ गतेका दिन सार्वजनिक विदा दिईएको छ । एक
काठमाडौं । साउनयता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा सूचिकृत २६ कम्पनीहरुको बोनस सेयर नेपाल धितोपत्र
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको
चन्द्रनिगाहपुरमा महिन्द्राको सुविधा सम्पन्न शोरुम, एसयूभी, पिकअप बिक्रीका लागि राखिने
काठमाडौं। अग्नि ग्रुपले रौतटहको चन्द्रनिगाहपुरमा महिन्द्राको गाडी र ट्याक्टरका लागि नयाँ ‘थ्रीएस सेटअप’ सहितको शोरुम
सस्तियो प्याज !
काठमाडौं । उपत्यकावासीको प्याजको माग केही दिनदेखि चिनियाँ प्याजले धान्न थालेको छ । भारतबाट प्याज